निलम्बित गोन्डोला, सामान्यतया निलम्बित प्लेटफर्मको रूपमा चिनिन्छ, रमाई को माध्यम ले बढि र कम गर्न को लागि मैन्युअल वा मोटर संचालित उपकरण संग एक या अधिक कर्मचारीहरु को लागि एक उपयोग मंच हो। प्लेटफार्महरू उच्च इमारतहरू वा घटकबाट इकट्ठा गर्न सकिन्छ कि वास्तुकला र काम सम्पन्न प्रकृति को सङ्कलन गर्न सकिन्छ। यी वा अस्थायी प्रयोग वा स्थायी प्रणालीको लागि हुन सक्छ। दुवैको आफ्नै अनूठा शासकीय कोड र नियमहरू छन्। स्थायी निलम्बित प्लेटफर्महरू प्राय: भवन मर्मतपत्र इकाइ (BMU) को रूपमा जान्छन् र उनीहरूलाई निलम्बन गरिएका प्लेटफर्महरू पनि गोन्डोलसका रूपमा चिनिन्छन्।
Gondola मानिसहरू र तिनीहरूका काम गर्ने उपकरणहरू उठाउनका लागि अस्थायी अनुप्रयोगहरूका लागि हो - असीमित ऊँचाइमा।
गन्डोलाले हल्का हल्का अनुप्रयोगहरू जस्तै पेंटिंग र सजावट, पुनःबर्घाई गर्ने, पुन: मिलाउने र मरम्मत गर्ने, सञ्झ्याल सफा गर्ने जस्ता आदिका लागि उपयुक्त सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। पूरा प्रणालीले दुई बिजुली लिस्ट होस्ट र सहायक पाङ्ग्राहरूसँग सुसज्जित काम गर्ने प्लेटफार्म समावेश गर्दछ। एक निलम्बन ढाँचा।
पर्सनलमा खतरा बिना सुरक्षित अपरेशन सुनिश्चित गर्न, यो प्लेटफार्म निम्न सुरक्षा उपकरणहरूसँग फिट हुन्छ:
1 सेवा ब्रेक लिमिटेड लिपिमा समावेश गरिएको छ।
2. सुरक्षा तार रसहरूमा अभिनय दुई गिरफ्तार गरिएका यन्त्रहरू।
3. दुई उच्च सीमा स्विच।
4. बिजुली विफलताको स्थितिमा कुनै शक्तिको उत्पत्ति छैन।
5. आकस्मिक रोक्नुहोस्।
6. चरण नियन्त्रक। (विकल्प)
7 एन 1808 को अनुसार लिमिटेड होस्ट मा समावेश ओभरलोड सेन्सर। (विकल्प)
zlp पहुँच प्लेटफर्म / उच्च वृद्धि सञ्झ्याल सफाई equi ...
zlp सीरिज एरियल निलम्बित कार्य प्लेटफार्म, भवन लिफ्टिंग ...
बिजुली को लागी तार रस्सी gondola zlp500 स्प्रे पेंट निलम्बित ...
सीई / आईएसओ अनुमोदित ZLP बिजुली निर्माण / निर्माण / बाह्य ...
सीई स्वीकृत ZLP800 निलम्बित प्लेटफर्म / बिजुली पालना / gondol ...
सञ्झ्याल सफाई मेनु / निलम्बित प्लेटफर्म / गोन्डोला / मचान ...
निलम्बित मस्त क्लिमिङ कार्य प्लेटफार्म 630 किलो खण्ड सफा गर्दै ...
चीन कारखाने भारत मूल्य मूल्य srp निलंबित रस्सी प्लेटफर्म को सफाई को लागि
चित्रित एल्यूमिनियम निलम्बित तार रस्सी प्लेटफार्म 500 किलोग्राम / 630 किलोग्राम / 800 किग्रा / 1000 किग्रा
ZLP500 एरियल निलम्बित प्लेटफर्म पालना निर्माण उपकरणको बाहिरी पर्खालको लागि